पहिले जनता बचाउ
अहिले नेपालका आम नागरिकहरू जीवन र मरणको दोसाँधमा छन् । आमनागरिक मृत्युसँग जुधिरहेछन्, राज्यसँग जीवनको भिख मागिरहेका छन् । अस्पतालमा बिरामीहरूले बेड नपाएर अस्पतालको परिसरभित्र, खुलाचौरमा बस्न बाध्य छन् । धेरैजसो बिरामीहरू अक्सिजन नपाएर तड्पी तड्पी मर्नुपरेको कारूणिक अवस्था छ । उनीहरूको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन् भैरहेको छ ।
यस्तो भयावहको विषम परिस्थितिमा दल, दलका नेता कार्यकर्ताहरू सबै एकजुट भएर महामारीसँग लड्नुपर्ने बेला हो तर राजनीतिले अर्कै मोड लिएको छ । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो भएको छ । राजनैतिक परिवेश फेरि बदलिएको छ । प्रतिनिधि सभा फेरि दोस्रो पटक विघटन भएको छ । मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा पनि भैसकेको अवस्था छ ।
अब मुलुकको राजनैतिक परिवेश कतातिर मोडिन्छ ? अबका दिनहरूमा फेरि के हुन्छ ? यिनै बिषयमा चर्चा परि चर्चा भैरहेका छन् । चारैतिर । विभिन्न संघ संस्था कानुनबिद, नागरिकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भनी विभिन्न खाले तर्क गरिरहेका छन् । बिरोध गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकको राजनीति अब के हुने हो ? एकातिर चिन्ताको बिषय पनि छ । अबका दिनमा के हुन्छ ? कसैले आँकलन गर्न नसकिने अवस्थाको सृजना भएको छ । यदि दलहरू चुनावमा नजाने भए भने चुनाव होला र ? यदि चुनाव भै हाले पनि जनतालाई कोरोनाले आक्रान्त थिलथिलो पारेको अवस्थामा घर घरमा रूवाबासी चलेको अवस्थामा जनताले भोट हाल्न जाने सहज वातावरण बन्ला कि नबन्ला ? खै कस्ले बुझ्छ ?? यतातिर ध्यान जानुपर्छ कि पर्दैन ?
हिजो जनताले दलहरूलाई उच्च बिन्दुमा पु¥याएका थिए । नेता बनाएका थिए । आज तिनै जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ । अक्सिजन नपाएर मर्नुपरेको पीडा तिन्का परिवार जनहरूले सहजै बिर्सिन सक्छन् ? भोट माग्न कुन अनुहार लिएर जनताको घर दैलोमा जानू ? यावत कुराहरू सोच्नै पर्ने हुन्छ ।
यतिबेला त दल र नेताले जनताको चोटमा मलम लगाउने बेला हो । उनीहरूलाई साथ सहयोग गर्ने बेला हो । कोरोना संक्रमितले सहज उपचार पाए नपाएको हेर्ने बेला हो । लक डाउनको मारमा परेका रोजगारी गुमाएका जनता प्रति ध्यान जानुपर्ने बेला हो । लोकसमस्यातिर लोक नेताका ध्यान गएको छैन ।
जनतालाई कसरी बचाउन सकिन्छ ? त्यतातिर लाग्नु पर्ने बेलामा नेताहरू सत्ताको झगडामा लागेका छन् । यो बेला सरकार न प्रतिपक्ष सबैको दायित्व भनेको आफना नागरिक बचाउनु हो न कि कुर्सी बचाउनु शक्ति प्रदर्शन गर्नु ।